जापानी शरद enjoyतु लाई कसरी रमाइलो गर्ने! यो यात्रा को लागी सबै भन्दा राम्रो मौसम हो! - Best of Japan
यदि तपाईं गिरावटमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने, कस्तो किसिमको यात्रा सबैभन्दा रमाइलो छ? जापानमा वसन्त withतुको हिसाबले शरद theतु सबैभन्दा सहज मौसम हो। जापानीज द्वीपसमूहको पहाड रातो र पहेंलो रंगमा शरद colorsतुको रंगमा निर्भर गर्दछ। कृषि बाली शरद inतु मा कटाई र स्वादिष्ट भोजन को मजा लिन सकिन्छ। यस पृष्ठमा, म सिफारिश गरिएका स्थानहरू परिचय दिन चाहन्छु यदि तपाईं जापानमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ।
जापानमा सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरमा भ्रमणको लागि सिफारिश गरिएको
परम्परागत शहरहरू जस्तै क्योटो र नारा सुन्दर छन्
हिमालहरूको शरद पातहरू हेर्न जान पनि सिफारिस गरिन्छ
म जापानी शरद onतु मा हरेक महिना को लागी लेखहरु भेला गर्छु। यदि तपाईं त्यस्ता विवरणहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइड हेर्नुहोस् र तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना बनाउनुभएको महिनामा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि जापानीहरूले शरद whatतुमा कस्ता खालका लुगाहरू लगाउँदछन्, मैले लेख पनि लेखें जुन यसलाई प्रस्तुत गर्‍यो, यदि तपाइँ आपत्तिजनक छैन भने पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस्।
यदि तपाई सेप्टेम्बरमा जापान मा यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको कस्तो प्रकारको ध्यान छ? त्यसो भए, सेप्टेम्बरमा जापानमा पर्यटन स्थलहरू कहाँ सिफारिस गरिएका छन्? यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्दछु जब तपाईं सेप्टेम्बरमा जापान जानुहुन्छ। सामग्रीको तालिका सेप्टेम्बरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी सँधै नयाँ मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गर्नुहोस् लेटको भ्रमणका स्थानहरू जस्तै मन्दिरहरू र मन्दिरहरू भेट्टाउनुहोस्, होक्काइडोमा, तपाईं ग्रीष्म र शरद दुबै आनन्द लिन सक्नुहुन्छ! सेप्टेम्बरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी यदि तपाई सेप्टेम्बरमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र अधिक जानकारी हेर्न जानुहोस्। आउनुहोस् हामी सधैं भर्खरको मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गरौं एउटा ठूलो छाल समुद्री तटमा अवस्थित ओराइ इसोसाकी तीर्थ मन्दिरमा प्रहार गर्दछ। सेप्टेम्बरमा मौसम गम्भीर परिवर्तन हुँदैछ। सेप्टेम्बर मा धेरै बरसात दिन छन्। थप रूपमा, आँधीले अक्सर आक्रमण गर्दछ। यदि जापानमा एक टाइफुन आउँदो दिन देखिन्छ भने, कृपया तपाईंको यात्रा यात्रा जतिसक्दो चाँडो परिवर्तन गर्ने विचार गर्नुहोस्। जब टाइफून आइपुग्छ, धेरै रेल र विमानहरू सर्दैनन्। तपाईं सार्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं यस्तो अवस्था सामना गर्नुपर्दछ, कृपया नजिकको होटलको लागि आरक्षण गर्नुहोस् यो पूर्ण हुनु अघि। जापानको दर्शनीय स्थलहरू जस्तै मंदिरहरू र तीर्थ स्थानहरू भ्रमण गरौं - किशोनोमा महिलाहरू किशोनोमा रातो तोरी फाटकमा हिंडिरहेका छन् फुशमी इनारी मन्दिर, जापानको क्योटोको प्रसिद्ध स्थलहरू मध्ये एक = शटरस्टक ...
यदि तपाईं अक्टोबरमा जापान मा यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, कस्तो प्रकारको दर्शनीय स्थल सब भन्दा राम्रो छ? हरेक वर्ष अक्टोबरदेखि नोभेम्बर सम्म जापानमा पूर्ण शरद haveतु हुन्छ। यदि तपाईं सुन्दर शरद leavesतु पातहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, शरद पातहरू क्योटो र नारामा त्यति सुरु भएको छैन, त्यसैले म तपाईंलाई थोरै चिसो क्षेत्रहरू जस्तै होक्काइडो र तोहोकु क्षेत्र भ्रमण गर्न सिफारिस गर्दछु। अर्कोतर्फ, क्योटो र नारा अझै नोभेम्बरमा जत्तिकै भीडले भरिएका छैनन्, त्यसैले मलाई लाग्छ तपाईं आरामदायी भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। अक्टूबरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारीको तालिकामा अक्टूबरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको क्योटो इन्फोर्मेशन जस्ता परम्परागत शहरहरूको होक्काइडो वा हाउल्डोन्ड्सको सुन्दर मौसममा शरद leavesतुको पत्ताहरूको आनन्द लिनुहोस् यदि तपाईं अक्टूबरमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र थप जानकारी हेर्न जानुहोस्। होक्काइडो वा होन्शुमा उच्च पहाडमा शरद leavesतुको पत्ताहरूको आनन्द लिनुहोस् होक्काइडो युनिभर्सिटी सप्पोरो शहर होक्काइडो जापानको शरद streetतुमा २ October अक्टुबर २०१ = मा = शटरस्टक यदि तपाईं अक्टुबरमा प्रामाणिक शरद leavesतु पातहरू हेर्न जान चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि होक्काइडो वा उच्च भूभागमा। हुनशु। मेनल्याण्डका प्रमुख शहरहरू, जस्तै टोकियो, अक्टुबरमा अझै शरद intsतु टिप्स छैन। अर्कोतर्फ होक्काइडो (शापुरजस्ता शिपोरो लगायतका क्षेत्रहरू) र होन्शुको उच्च भूभाग अक्टुबरमा शरद inतुमा आफ्नो शिखरमा पुगेका छन्। यो भन्न सकिन्छ कि अक्टुबरमा शरद leavesतुका पातहरूको २ प्रकारका दृश्य ठाउँहरू छन्। यो ...
मलाई लाग्छ कि नोभेम्बर जापानको वरिपरि घुम्नका लागि उत्तम मौसम हो। तपाईं टोकियो, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा जस्ता प्रमुख शहरहरूमा सुंदर शरद leavesतु पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं मन्दिर र मन्दिरहरूमा अचम्मको दृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी मध्य नोभेम्बर देखि ढिलोसम्म, मलाई लाग्छ कि यो केवल रूखहरूसहितको सडक र पार्कको साथ हिंड्नु रमाईलो छ। यद्यपि यो उत्तम मौसम हो किनकि सबैतिर पर्यटकहरू बसिरहेका छन्। यो उत्तम छ कि दिमागमा तपाइँको यात्रा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न राम्रो हुनेछ। यस पृष्ठमा, म उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्दछु जब तपाईं नोभेम्बरमा जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ। सामग्रीको तालिका नोभेम्बरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको सूचना November नोभेम्बरमा जापानका प्रख्यात पर्यटन स्थलहरू जताततै भीडले भरिएका छन् शहरी पैदल मार्ग र पार्कहरूमा पनि शरद leavesतुहरू सुन्दर छन् नोभेम्बरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडो जानको लागि यदि तपाइँ योजना बनाउनुहुन्छ भने। नोभेम्बरमा, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र थप जानकारी हेर्न जानुहोस्। नोभेम्बरमा जापानका प्रसिद्ध पर्यटक गन्तव्यहरू जताततै भीडले भरिएका छन् शहरको मध्य भागमा साँझको साँझमा व्यस्त सडकको सामान्य दृश्य। नोभेम्बर,, २०१ Ky क्योटो, जापान = शटरस्टक नोभेम्बरमा क्योटो र नारामा मन्दिर र मन्दिरहरू शरद leavesतु पातले घेरिएका छन् र चित्रकलाको संसार जत्तिकै सुन्दर बन्छन्। नोभेम्बरमा जापानको मौसम देशव्यापी रूपमा स्थिर छ र त्यहाँ धेरै घमाइलो दिनहरू छन्। हावा गर्मी जस्तो ओसिलो छैन, र तपाई आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। नोभेम्बर केवल दर्शनीय स्थलहरूको उत्तम मौसम हो। दुबै घरेलु पर्यटक र विदेशी पर्यटक नोभेम्बरमा धेरै असंख्य छन्। तसर्थ, ...
यदि तपाई शरद Japanतुमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले कस्तो किसिमको कपडा तयार गर्नु पर्छ? यदि यो शरद isतु हो भने, यो सेप्टेम्बर, अक्टुबर वा नोभेम्बरमा भर पर्दै वस्त्रहरू फरक फरक छन्। यस पृष्ठमा, म जापानी को शरद clothesतु कपडा ठोस फोटो संग परिचय गर्दछु। तपाईको यात्राको लागि तयारी गर्दा कृपया यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्। सामग्रीको तालिका तयारी गर्न केहि चीज तपाई कुन महिना यात्रा गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ कपडा लगाउने किसिमका शरद Clothingतुका कपडाहरू तयारी गर्नको लागि जुन महिनामा तपाई यात्रा गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ शरद hotतु तातो गर्मीदेखि चिसो जाडोमा संक्रमणको अवधि हो। शरद Inतुमा, यो बिस्तारै चिसो हुनेछ, त्यसैले तपाइँको लुगाहरू एकदम फरक हुनेछ तपाइँ कुन महिना यात्रा गर्ने आधारमा। यदि तपाइँ सेप्टेम्बर को पहिलो आधा मा यात्रा, जापान को जलवायु अझै राम्रो गर्मी छ। धेरै जापानीहरू अझै पनि यस अवधिमा छोटो-बाहुको शर्ट लगाएका छन्। यद्यपि वर्षाका दिनहरू बढ्दै जाँदा आँधी पनि आउँदछ, त्यसैले त्यहाँ चिसो दिन पनि छ। व्यक्ति जो कार्डिगनहरू जस्तै कोट लगाउँछन्, मुख्यतया महिलाहरू, बिस्तारै बढ्नेछ। सेप्टेम्बरको उत्तरार्धमा, कूलर दिनहरू बिस्तारै बढ्नेछ। धेरै व्यक्तिहरू शरद clothesतुका लुगाहरू लगाउँछन्, शरद fashionतु फेसनमा रुचि राख्ने युवा युवतीहरूको साथ। अक्टुबरमा, ओकिनावा र अन्य बाहेक केही व्यक्तिले छोटो-बाहुको शर्ट लगाउँदछन्। होक्काइडो वा होन्शुको उच्च भूमिमा शरद् पातहरू भेट्न आएका पर्यटकहरूले ज्याकेट, जम्पर लगाउने र यस्तै अन्य चीजहरू लगाउँदछन् कि तिनीहरू चिसो मौसममा पनि ठीक हुनेछन्। नोभेम्बरको पहिलो आधामा, अधिक व्यक्तिहरूले ज्याकेट, जम्परहरू लगाउनेछन्। नोभेम्बरको उत्तरार्धमा, ...
यदि तपाईं गिरावटमा जापानमा यात्रा गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि परम्परागत शहर क्योटो वा नारा जस्तो पहिले। यस्तो शहरमा धेरै मन्दिर र मन्दिरहरू छन्। यी धेरै दृश्यहरू शरद Manyतुमा शरद inतुमा अधिक सुन्दर छन्। तपाईं मन्दिर र मन्दिरको वरिपरि हिंड्दा तपाईं स्फूर्ति लिन सक्नुहुनेछ।
यो नोभेम्बरको दोस्रो आधा तिर हो जुन शरद leavesतुका पातहरू जापानी प्रमुख शहरहरूमा देख्न सकिन्छ। त्यस समयमा विशेष गरी क्योटोमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू आउँदछन् र प्रख्यात तीर्थ स्थान र मन्दिरहरू जताततै धेरै भीडले भरिन्छन्।
यदि तपाईं शरद पातहरूमा यस समयमा शान्तपूर्वक हिड्न चाहनुहुन्छ भने, उत्तम हो भने बिहान सबेरै नै होटल छोड्नु राम्रो हुन्छ। यस बाहेक, केवल प्रसिद्ध मन्दिरहरूमा नजानु उत्तम हुन्छ। तपाईले आफ्नो मार्गमा कम पर्यटकहरू सहित स्थानहरू थप्न सक्नुहुन्छ
यो पहिलेको माथिको तस्वीरमा जस्तो उज्ज्वल दृश्यहरू हेर्न सक्षम नहुन सक्छ। यद्यपि त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा थोरै पर्यटकहरू छन्, तपाईं शान्तसाथ भ्रमण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
क्योटोको तुलनामा नारासँग थोरै पर्यटक छन्। तपाईं चुपचाप शरद umnतु पात र मन्दिरहरू साथ हिंड्न सक्षम हुनेछ।
जापानमा अरू धेरै परम्परागत शहरहरू पनि छन्। उदाहरणको लागि, होन्शुको मध्य भागमा कानाजावा र पश्चिमी होन्शुको म्यात्सु जस्ता शहरहरू थोरै साना छन्, तर उनीहरूले तपाईंको दिमाग ताजा गर्न पर्यटन स्थलहरू सिफारिस गर्छन्।
शरद Inतुमा, जापानको पहाडहरू रातो र रातो पातलो रंगको पातलो रंगको हुन्छ। हाकोबा, कामिकोची र नागानो प्रान्तको करुइजावा जस्ता उच्च भूभागहरू शरद leavesतुको पातहरूमा सेप्टेम्बरको अन्तदेखि अक्टोबरको अन्तसम्म सुन्दर हुन्छन्।
त्यहाँ धेरै स्थानहरू छन् जहाँ तपाईं सजिलैसँग टोकियोबाट त्यस्ता उच्च भूभागहरूमा जान सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाईं टोकियो बाट Shinkansen द्वारा १ घण्टा मा Karuizawa जान सक्नुहुन्छ।
हकुबामा पनि जहाँ अधिक प्रामाणिक पहाडहरू बढ्छन्, तपाईं सजिलैसँग गोन्डोला चढेर सुन्दर पहाडहरूमा जान सक्नुहुन्छ र हकुबा गाउँको बीचबाट लिफ्ट लिन सक्नुहुन्छ।
अवश्य पनि, जब तपाईं पहाडहरूमा जानुहुन्छ, कृपया मौसम आदि बारे विस्तृत जानकारी स to्कलन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
शरद Inतुमा, मलाई लाग्छ तपाईं जापानमा साँच्चिकै आरामदायी खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। टोकियो र ओसाकामा विभिन्न दर्शनीय स्थलहरूको भ्रमणका साथै विभिन्न खेलहरू खोज्न शरद सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। कृपया आएर जापानको पतनको अनुभव गर्नुहोस्!